चिकित्सकको लापरबाहीले सुत्केरीको ज्यान जोखिममा - Marganugami Daily
Marganugami Daily Apradh Khabar Breaking Headline1 Headline2 Main News National social Socity Technology स्थानीय चिकित्सकको लापरबाहीले सुत्केरीको ज्यान जोखिममा
चिकित्सकको लापरबाहीले सुत्केरीको ज्यान जोखिममा
Marganugamidaily प्रकाशित समय 12:55:00 AM
लहान, २४ साउन । सिरहा–७ की मनतोरिया मण्डललाई सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि परिवारजनले जिल्ला अस्पताल सिरहा लगे । मनतोरिया पहिलोपटक आमा बन्दै थिइन् । त्यही भएर सिरहा अस्पतालका चिकित्सकले शल्यक्रिया सुविधा भएको अस्पताल लग्न सुझाव दिए । मण्डल परिवारले मनतोरियालाई असार ३१ गत्ते लहानस्थित सप्तऋषि अस्पताल ल्यायो ।
अस्पतालमा भर्ना भएको झन्डै २४ घण्टापछि (असार ३२ गते) चिकित्सकले मनतोरियाको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने जानकारी परिवारलाई गराए । ‘छिटै शल्यक्रिया गर्नुपर्छ, तुरुन्त सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी मन्जुरी जनाउन भनेपछि हामीले शल्यक्रियाका लागि मन्जुरी दियौं , मनतोरियाका पति श्रवण मण्डलले भने । शल्यक्रिया गरेर सकुशल बच्चा जन्मियो । बच्चा जन्मेको सात दिनपछि (साउन ७ गते) मनतोरियालाई औषधि दिएर अस्पालले डिस्चार्ज ग¥यो । घर फर्केको दुईचार दिनमै मनतोरिया लाई पेट पोल्ने, ढाडिने समस्या भएपछि आफन्त उनलाई लिएर सप्तऋषि अस्पतालमै आए । ‘राम्रो उपचारको आस गरेर अस्पताल पुगेको थिएँ, ज्यानै लिने खोजे । सप्तऋषि उपचार केन्द्र भन्दा पनि ज्यानमारा केन्द्र रहेछ ।
चिकित्सकले औषधी थपेर ‘निको हुन्छ भन्दै घर फर्काए । उनको समस्या झन्झन् बल्झिँदै गयो । पेट पोल्ने, ढाडिने समस्या बढेर दिसापिसाबसमेत बन्द भएपछि मण्डल परिवार अत्तालियो । ‘फेरि साउन १९ गते बिरामीलाई सप्तऋषि अस्पताल पु¥यायौं । चिकित्सकले जाँच पडताल गर्दा पेटभित्रै समस्या हुन सक्ने भन्दै विराटनगरको सुविधासम्पन्न अस्पताल लग्न भने, श्रवणले भने, ‘अनि हामी हतारहतार विराटनगरको नोवल अस्पताल पु¥यायौं । त्यहाँ मनतोरियाको पेटको शल्यक्रिया भयो तर समस्या पत्ता लागेन । सुत्केरी गराउन सप्तऋषि अस्पतालले शल्यक्रिया गरेको ठाउँमा शल्यक्रिया गर्दा बल्ल चिकित्सकले समस्याको कारण पत्ता लगाए । नोवल अस्पतालमा पत्नीको कुरुवा बसेका श्रवणले नागरिकसँग भने, ‘सप्तऋषिका चिकित्सकले शल्यक्रिया गर्दा गज (कपडा) पेटभित्रै छोडर सिलाई गरिदिएका रहेछन् । उनीहरुले शल्यक्रियामा गरेको लापरबाही मेरी पत्नीको मृत्युको कारण बन्न सक्थ्यो । नोवलमा शल्यक्रिया गर्दा दुईवटा गज पेटभित्र फेलापरेको श्रवणले बताए । ‘अझै उनी (मनतोरिया) जीवनमरणको दोसाँधमा छिन् , फोनमा श्रवणले भने, ‘उनी चार दिनदेखि आइसियू (सघन उपचार कक्ष) मा छिन् । घरिघरि पिलिक्क आँखा खोल्छिन, फेरि बन्द गर्छिन् । आवाज निकालेर पीडा बताउन नसके पनि आँखाबाट आँसु चुहाएर पीडा पोखिरहेकी छिन् ।
सप्तऋषि अस्पतालको लापर बाहीले आफूले झन्डै पत्नी गुमाउनुपरेको उनले बताए । ‘राम्रो उपचारको आस गरेर अस्पताल पुगेको थिएँ, ज्यानै लिने खोजे । सप्तऋषि उपचार केन्द्रभन्दा पनि ज्यानमारा केन्द्र रहेछ , उनले भने ।
सप्तऋषि अस्पतालका संस्थापक डा. पशुपति चौधरीले आफू र डा. सुनिलकुमार विराजीको टिमबाट असार ३२ गते बिहान ५ः३५ मा शल्यक्रिया भएको बताए । ‘शल्यक्रिया सफल भएको थियो । बच्चा पनि सकुशल थियो । सात दिन अस्पतालमा राखेर घर पठायौं । त्यसपछि टाँका कटाउन पनि यहीं आए । अचानक पेट ढाडिने, पोल्ने समस्या भयो , उनले भने, ‘पछि दिसापिसाब पनि बन्द भएर यहाँ आएपछि हामीले आन्द्रा अवरुद्ध भएको शंका गरेर विराटनगर रेफर गरेका हौं । त्यहाँ पुनः शल्यक्रिया भएको थाहा पाएँ ।
मनतोरियाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझ्न अस्पतालबाट स्वास्थ्यकर्मी पठाएको उनले बताए । ‘उनको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार हुँदै गएको छ , उनले भने । आफूहरुले जानाजान कुनै गल्ती नगरेको दाबी पनि उनले गरे । शल्यक्रियाका बेला पेटभित्रै गज छुटेको घटनालाई अस्वीकार गर्न भने उनले सकेनन् । ‘सिडिओ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) ले घटनाबारे अनुसन्धान गर्दैछन् । यथार्थ बाहिर आइहाल्छ , उनले भने ।
सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले घटनाबारे पीडितले मौखिक जानकारी गराएको बताए । ‘लिखित जाहेरी लिएर आउन भनेको छु , उनले भने, ‘लिखित जाहेरी आएपछि कारबाही अघि बढाउँछु । मनतोरियाका भिनाजु रामहरि मण्डलले मेडिकल रिपोर्टलगायतका कागजात संलग्न गरी जाहेरी दिने तयारी गरेको बताए । ‘सिडिओ साबलाई मौखिक जाहेरी गराइसकेको छु , उनले भने, ‘हामीलाई सप्तऋषि अस्पताल पक्षबाट विभिन्नखाले प्रलोभन दिइँदैछ तर हामी कानुनी कारबाहीको पक्षमा छौं । चिकित्सकको लापरबाहीले मनतोरियाको जीवन जोखिममा परेपछि उनका आफन्तले सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्बन्धित निकायसमक्ष निसाफ का लागि गुहार मागेका छन् ।
#Apradh Khabar #Breaking #Headline1 #Headline2 #Main News #National #social #Socity #Technology #स्थानीय